Yusuf Garaad: Gaas
Khudbadda Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Cabdweli Gaas ayaan dhegeystay. Waa khudbadda uu la doontay maalin aan is leeyahay kuma habbooneyn khudbaddaas oo kale - waa 1-da Luulyo.
Waxaan aad u dhuuxay qeybta ku saabsan nabadda iyo colaadda iyo shirka Cadaado aragtida uu ka qabo.
Aniga oo dareensan arrinta uu mudane Gaas ka gubanayo, garowshiyana u haya, haddana ma jecleysan sida uu ugu talax tegey buunka colaadeed ee isugu jira hanjabaadda iyo erayada qadafka ah ee ku wajahan walaalihiisa Soomaaliyeed ee la deriska ah, maamul ahaanna aad uga da'da yar.
Waan og ahay oo khibraddeyda saxaafadda ayaa i bartay in reer Mudug ay caan ku yihiin hadal toos ah oo adag iyo hanjabaad aan waxba la isula harin, laakiin aan la isugu dhammaan sida la isugu gooddinayo si le’eg.
Haddana aqoonyahan, Ra’iisal Wasaare hore, Murashax Madaxweyne, iyo mas’uul loo doortay in uu hago Puntland oo hadalka sidaa u kulul jeediyay, ma ahan in la iska dayo in la iska dhega tiro.
Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedka Puntland iyo Baralaamnka Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa la gudboon in haddii maamul la dhisayo la xaqiijiyo in uu ahaado mid wax noo kordhiya haddaan Soomaali nahay. Waa in uu ahaadaa mid aan noo horseedin colaad, nabadda yar oo hadda la haystana aan wax u dhimin.
Haddii sida muuqataa uu ugu yaraan hal dhinac aamminsan yahay in maamulka la dhisayaa uu nabadda wax u dhimayo ma ahan in la isku qanciyo in uu dhinaacsi isagu khaldan yahay ama uu ujeeddo kale ka leeyahay.
Waa in laga fariisto, la is tuso oo la is taabsiiyo lana saxo ama la iska qanciyo.
Colaad ugu yaraan laba dhinac ama ka badan ayay dhex martaa. Laakiin si ay colaadi u qaraxdo shuruud ma ahan in labada dhinac ay rabaan in ay is dagaalaan. Xataa shardi ma ahan in labada midkood uu diyaar u yahay in isagu uu daandaansado dhanka kale.
Waxay ku imaan kartaa kala shaki oo keliya.
Hadallada Madaxweyne Gaas waa kuwo u baahan in inta ay khuseysaa ay si xilkasnimo, biseyl iyo isu garaabid ku saleysan ay u wadahadlaan si inta ay hadal joogto la isu fahmo oo xal loo gaaro.
Wiil Soomaaliyeed oo careysan ninkii xabbad ka badbaadiya ayaan anigu Hoggaamiye u aqaan.